& Mivory mora foana
Ny dredge tohatra toharety marika Ellicott voalohany dia noforonina tamin'ny taona 1940. Tany am-boalohany dia natao hitrandrahana ny lalan-drano izay tery loatra ka tsy tokony hiasa ny dredge. Ankehitriny i Ellicott dia manohy mamorona sy manamboatra 8 ", 12", ary 14 ing Swinging Dragon® Dredges izay mora entina ary manolotra sakamalaho malalaka ho an'ny marina tsara indrindra.
Naorina hatramin'ny farany
Ny rafitry ny dredge mavesatra no namboarina maharitra nandritra ny taona maro ary mety ho an'ny tontolo iainana, lakandrano, lalan-drano ary fasika mifandraika amin'ny fasika. Ny dredge tohatra miakatra dia mahavita mando karazan-tany mifangaro ary fitaovana matevina toy ny tanimanga sy menaka.
Ny tsipika fanodinana tohatra tohatra nataon'i Ellicott dia manolotra karazana fitaovana maharitra toy ny Ellicott Series 360SL Swinging Dragon® Dredge. Ity dredge ity dia miaraka amina fanaraha-maso elektronika mitaha amin'ny asa dredging marina. Ianao ve mitady dredge mora vory? Avy eo ianao dia mety te-handinika ny Ellicott 460SLM Sweding Dragon® Dredge izay azo atambatra mora foana miaraka amina fitaovan'ny tanana sy vano an-dranomasina. Ho an'ny mpandraharaha dredge efa za-draharaha, ny Ellicott Series 860SL mitsoka Dragon® Dredge dia mahavita mandavaka lalina hatramin'ny 30 '(9.1 m) ary mahazaka toe-javatra ratsy.